सिताको डेब्यु: कतिको दरिलो रुपमा उभ्याउन सक्लिन् ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment सिताको डेब्यु: कतिको दरिलो रुपमा उभ्याउन सक्लिन् ?
सिताको डेब्यु: कतिको दरिलो रुपमा उभ्याउन सक्लिन् ?
काठमाडौं – चलचित्र ‘लिलिबिली’ शुक्रबारबाट रिलिज भएको छ । नव नायिका जसिता गुरुङको यस चलचित्रमा डेब्यु अभिनय हेर्न सकिन्छ । जसिताको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा उदय भएको छ, जसले अब आफूलाई दरिलो रुपमा चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि लैजान सक्छिन् भन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
शुक्रबारबाट रिलिज भएको चलचित्र ‘लिलिबिली’बाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी नायिका जसिता गुरुङले त्यस्तो बलियो संभावना बनाएकी छिन्, जसले अबको चलचित्र क्षेत्रमा आफूललाई दरिलो रुपमा उभ्याउन सक्छिन् ।
उनले चलचित्रमा गरेको कामको प्रशंसा गर्न कञ्जुस्याँई गर्नु हुँदैन । कारण, उनले चलचित्रलाई नै बोकेकी छिन् । नायक प्रदिप खड्का जस्ता स्टार भएको चलचित्रमा पनि जसिता जुन तरिकाले हाबी छिन्, त्यसले उनको कामको तारिफ गर्न सकिन्छ ।
जसिताको अभिनय, सुन्दरता, लुक्स, बोल्डनेश हरेक कुराको प्रशंसा गर्न सकिन्छ । साम्राज्ञीपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रले जसितालाई अर्की बुलन्द नायिकाको रुपमा पाएको छ ।
अब, जसिताले पनि चलचित्रको छनोटमा ध्यान दिने हो भने उनी हाई डिमाण्डेड नायिकाको रुपमा पर्ने पक्का रहेको चर्चा हुन हुन थालेको छ ।